သူမရဲ့သားလေးရှိရာကို (၂)နှစ်တိတိသွားမတွေဖြစ်တဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းကိုပရိတ်သတ်တွေအားပြောပြလာတဲ့ သန္တာလှိုင် - News
November 3, 2021 admin သတင္း 0
ယနေ့တိုင်း မိန်းကလေးတိုင်းအားကျနေရလောက်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလှေ တွကိုပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့တာကတော့ သန္တာလှိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်သာရလာပေမယ့် သူရဲ့အလှတွေကြောင့်ယနေ့တိုင် အားကျချစ်ခင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။
ဆယ်ကျော်သက်လေးအတိုင်းကိုအမြဲနုပျိုလှပနေတာဖြစ်ပါတယ်။မော်ဒယ်လောကမှာလည်း တက်သစ်စမော်ဒယ်သရုပ်ဆောင်တွေပါ မလေးစားမနေနိုင်လောက်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။
သူမဟာ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကျန်းမာရေးကိုလည်းလိုက်စားပြီး ခန္ဓာကိုယ်ထိန်းသိမ်းတာတွေလုပ်သ လိုမိသားစုလေးနဲပျော်ရွှင်စရာအချိန်တွေကိုဖြတ်သန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုလည်းလူမှုကွန်ရက်မှာတင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။
ခုမှာတော့သားလေးနဲ့မတွေ့ရတာ ၂နှစ်ပြည့်တဲ့အကြောင်းလေးကို ပြောပြထားတာပါ။သားလေးနဲ့ မတွေ့ရတာ၂နှစ်ပြည့်တော့မယ်…
သူတို့လေးတွေနဲ့တွေ့ဖို့စဉ်းစားလိုက်တိုင်း အိမ်ပြန်မလာနိုင်တော့သားသမီးတွေကိုမျှော်နေမိတဲ့မိဘတွေရဲ့ ရင်ထဲကဝမ်းနည်းချက်တွေကို ရင်နဲ့အပြည့်ခံစား ရပါတယ်လို့ ….
သူရဲ့ ဒီနှစ် Holloween Costume ကိုပုံလေးကြည့်ပြီးအလွမ်းဖြေရတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်မှာ ကလေးတွေနဲ့တွေ့ရဖို့မျှော်လင့်ချက်ရှိသေးတယ်……ဆိုပြီး ရေးသားခဲ့တာပါ။
မိဘတစ်ယောက်ဖြစ် တာကြောင့် သူမရဲ့ ကလေးတွေကို လွမ်းနေမိတဲ့ သန္တာလှိုင်ကိုလည်း အားပေးစကားလေးတွေနဲ့ချစ်ပေးကြပါဦးနော်။
ယနေ့တိုင်း မိန်းကလေးတိုင်းအားကျနေရလောက်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလှေ တွကိုပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့တာကတော့ သန္တာလှိုင်ပဲဖြစ်ပါတ ယ်။အသက်အရွယ်သာရလာပေမယ့် သူရဲ့အလှတွေကြောင့်ယနေ့တိုင် အားကျချစ်ခင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။
ဆယ်ကျော်သက်လေးအတိုင်းကိုအမြဲနုပျိုလှပနေတာဖြစ်ပါတယ်။မော်ဒယ်လောကမှာလည်း တက်သစ်စမော်ဒယ်သရုပ် ဆောင်တွေပါ မလေးစားမနေနိုင်လောက်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။
ခုမှာတော့သားလေးနဲ့မတွေ့ရတာ ၂နှစ်ပြည့်တဲ့အကြောင်းလေးကို ပြောပြထားတာပါ။သားလေးနဲ့ မတွေ့ရတာ၂နှစ်ပြည့်တော့မယ်…သူတို့လေးတွေနဲ့တွေ့ဖို့စဉ်းစားလိုက်တိုင်း အိမ်ပြန်မလာနိုင်တော့သားသမီးတွေကိုမျှော်နေမိတဲ့မိဘတွေရဲ့ ရင်ထဲကဝမ် းနည်းချက်တွေကို ရင်နဲ့အပြည့်ခံစား ရပါတယ်လို့ ….
မိဘတစ်​ယောက်ဖြစ် တာကြောင့် သူမရဲ့ ကလေးတွေကို လွမ်းနေမိတဲ့ သန္တာလှိုင်ကိုလည်း အားပေးစကားလေးတွေနဲ့ချစ်ပေးကြပါဦးနော်။